musha Kanadha Bianca Andreescu Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara yemukadzi Tennis mutambi ane zita rezita “Bhibhi".
Yedu vhezheni yeBianca Andreescu's Biography Chokwadi, kusanganisira yake Yehudiki Nyaya, inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa zviitiko kubva pamazuva ehusikana hwake. Isu tozoenderera mberi nekukuudza kuti akabudirira sei semutambi weTennis.
Ongororo yeBianca Andreescu's Bio inosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yemhuri, nyaya yehupenyu pamberi pemukurumbira uye kusimuka kune mukurumbira nyaya. Zvikuru, nhoroondo yekufambidzana yeTennis nyeredzi, hupenyu hwemunhu, chokwadi chemhuri, mararamiro uye zvimwe zvidiki zvisingazivikanwe chokwadi nezvake.
Hongu, munhu wese anoziva Ndiye mukadzi wekutanga kuhwina US Open mukuonekwa kwake kwekutanga. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Bianca Andreescu's Biography, iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwe ado, ngatitangei.
Bianca Andreescu Childhood Nhau - Hupenyu hwepakutanga uye Nhoroondo Yemhuri:
Tennis mutambi Bianca Vanessa Andreescu akaberekwa pazuva regumi nematanhatu raJune 16 kuMississauga muCanada. Akazvarwa kuna amai vake, Maria Andreescu uye kuna baba vake, Nicu Andreescu. Tarisai, vabereki vaBianca Andreescu.
Nyika yeCanada yedzinza chena nemidzi yekuRomania yakatanga yakakurira kumusha kwake kuMississauga kwaakapedza makore ake ekuumba kusvika mhuri yatamira kuRomania mu2006.
Kukura munyika yeEuropean - Romania, mudiki Bianca aive akanaka, ane simba uye anofarira mwana aiita mitambo yakasiyana inosanganisira gymnastics, skating uye Tennis.
Bianca Andreescu Dzidzo uye Basa Rekuvaka
Pakazosvika nguva Bianca akange ave zera 11 mu2011, mhuri yake yakadzokera kuCanada uko akaita danho rekutarisa kutamba tenisi uye akadzidziswa kuOntario Racquet Club kuMississauga.
Hazvina kutora nguva refu asati anyoresa kuTennis Canada chirongwa cheNational Training kuToronto, imwe nguva yaakanyanya kuita nezve mutambi tennis uye akasarudza kuzoita zvidzidzo zvepa online paBill Crothers Secondary School ku Unionville.
Bianca Andreescu Biography - Yekutanga Basa Rehupenyu:
Hupenyu hwepamoyo hwaBianca hwakatanga mu2014 paakarova nzira yake kuburikidza nevana vezera rake uye avo vaive vakuru kwaari kuti vakunde Les Petis As.
Akaenderera mberi nekuhwina iyo Yakakurumbira Orange Bowl gore iro uye akatora zita rechipiri kechipiri muna 2015.
Achitendiswa kuti hukuru hwakamumirira mune tenesi, Bianca akajaira tsika yekugara achihwina kuhwina US Open uye akazvinyorera cheki yekunyepedzera gore rega senge ndiye akahwina mumakwikwi e Grand slam.
Hazvishamise kuti iye akatonga diki junior pakati pa2014 na2016 asati atendeuka pro mu2017.
Bianca Andreescu Bio - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
Paari pane zvaakaratidzwa akazadza mugwagwa mukurumbira, Bianca akarova Bump iyo yakamuona achibudirira kuWimbledon ruzivo jolts sezvo akakundwa naKristina Kucova mumutambo wekutanga.
Kunyangwe Bianca aine zvishoma zvekumhanya kunoshamisa mu2018, iro gore zvishoma nezvishoma rakasvika kumagumo pasina zita idzva mukabati yake.
Kuti atore zvese, kukuvara musana kwakamumanikidza kuti abude muFed Cup munaNovember gore iro kuti aite Kisimusi iro chete zuva rezviitiko rakakodzera kupemberera nemhuri yake.
Bianca Andreescu Biography - Kumuka Kune Mukurumbira Nhau:
Neraki, 2019 yakazivisa mashoko akanaka kuna Bianca uyo muna Ndira akarekodha budiriro yake yekutanga nekuhwina zita rake rekutanga reWTA 125k kuNewport Beach.
Akaenderera mberi kuhwina mukombe waRoger wa2019 muCalifornia mushure memashure ekumashure akamanikidza muvengi wake - Serena Williams -Kuenda pamudyandigere mukutanga kuseti.
Aingova mazuva mashoma gare gare - kutaura zvazviri, asingasviki mwedzi - kuti Serena Williams akamuka zvakare kuti amire pakati paBianca nehope yake yehudiki yekutora kumba US OPEN Check.
Nekudaro, Bianca akasunga akadzikama tsinga uye chinangwa chechokwadi chakamuona achiva mutambi wekutanga akazvarwa muma2000 kuhwina iyo US Open. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Bianca Andreescu Hukama Hupenyu:
Kutevera kukunda kwakaitika pachena kwaBianca muUS, enjini dzekutsvaga dzakazadzwa nemibvunzo yakadai se "Bianca Andreescu kufambidzana nhoroondo" "Bianca Andreescu anoda hupenyu" uye "Bianca Andreescu mukomana"
Zvinosuruvarisa mhedzisiro yemibvunzo yakadai yanga isiri yakanaka kuona kune vanofarira kuziva sezvo Bianca achiri kuzopa nzwisiso diki pane ake ehukama hwehukama.
Kunyangwe iyo tenesi nyeredzi yaigara kufambidzana neimwe yehucheche shamwari uye mumwe mutambi tenesi - Ben Sigouin, nekukurumidza kumberi kudhara ivo vaviri havasisiri chinhu.
Nekudaro, iyo tenesi nyeredzi isina kana mwanakomana (s) kana mwanasikana (s) kunze kwemuchato anotendwa kwakawanda kuti haana kuroora panguva yekunyora.
Bianca Andreescu Hupenyu hwemhuri:
Bianca Andreescu yakakura pane mhuri. Tinokuunzira chokwadi chinoshamisa nezvehupenyu hwemhuri yake.
Nezve baba vaBianca Andreescu:
Nicu Andreescu ndibaba vaBianca. Akashanda kuTransylvania University yeBrasov panguva yehupenyu hwaBianca achiri mudiki uye akamusainira kosi yekudzidzira tenesi paaive akura 6.
Injiniya Nicu - sekuzivikanwa kwaanoitwa - haana kumbobvira arasa kemisitiri nemwanasikana wake anokosha kubva pamazuva ake ekuzvarwa kusvika nhasi. Muchokwadi, kuvapo kwake mumitambo yaBianca kunokurudzira mutambi wetennis kuti ape mutambo iye zvese.
About Bianca Andreescu amai:
Maria Andreescu ndiamai vaBianca. Iye ndiye anotonhorera uye akasimba kwazvo munhu uyo ​​Bianca akamboziva.
Aive Maria akadzidzisa Bianca maitiro ekufungisisa, chiitiko icho nyeredzi yetennis inogara ichiita uye ichiwana chinobatsira mukubatsira kusangana.
Kufanana nemurume wake, Maria haatomboenda kure Bianca kunyanya panguva yemitambo kwaanowanzounza imbwa yemhuri - Coco - seimwe yekutsigira system.
About Bianca Andreescu hama:
Pakave pasina kutaurwa kwakatendeka kwevakoma vaBianca, uye haanawo kugovana mafoto emumwe munhu anogona kufungidzirwa sehama kana hanzvadzi.
Nekuda kweizvozvo, mikana yacho iri mukufarira iye ari iye ega mwana akazvarwa kuvabereki vake vane rombo rakanaka.
Kuenderera mberi kune hupenyu hwemhuri hwaBianca hwakawedzerwa, hapana zvinyorwa zvevatezvara vake nasekuru vake apo zvisinganyanyozivikanwa nezve babamunini vake, babamunini, babamunini, babamunini uye vazukuru.
Bianca Andreescu Hupenyu hwepamoyo:
Iko kusiri kupokana kuti Bianca Andreescu ndiye mufananidzo wakakwana weGemini senge hunhu hwehunhu hwake girazi rinoratidzwa nevanhu vanoshamisa vanotungamirirwa nechiratidzo cheZodiac.
Iye ane hunyanzvi mune tune, anokurudzirwa, anofungidzira, akanaka uye haana matambudziko nekuburitsa pachena nezve hupenyu hwake hwega uye hwakavanzika.
Taura zvekufarira zvaBianca uye zvekuvaraidza zvaanoda zvekufungisisa, kushambira, kufambirana nemitambo yenhabvu uye kushandisa nguva neshamwari uye nemhuri.
Bianca Andreescu Mararamiro:
Nekuda kwekukunda iyo US Open, Bianca ine mambure akakosha anopfuura $ 50 Million panguva yekunyora. Nzvimbo dzehupfumi hwake hukuru kubva pamakohwina ake achihwina apo maitiro ake emashandisirwo anoratidza kuti anorarama hupenyu hwemutambarakede.
Kunyangwe hazvo zvidimbu zvine ruzivo zvichiri kuzobuda nezve imba yaBianca kuThornhill muOntario pamwe nekuunganidzwa kwake kwemotokari.
Iko hakuna kuramba chokwadi chekuti iyo tenesi nyeredzi inorarama yakakura sezvinoonekwa mumifananidzo yakanakisa inotonhorera iyo yaanogovana isati yabhadharisa majeti epachivande ekufamba kwake kunzvimbo dzinoyevedza dzezororo.
Bianca Andreescu Untold Chokwadi:
Tisati tazvitumidza kuti kuputira paBianca Andreescu nyaya yehudiki uye Biography, hezvino zvishoma-zvinozivikanwa kana zvisinga zivikanwe chokwadi nezvake.
Zvishoma zvinozivikanwa nezvechinamato chaBianca panguva yekunyora, zvisinei, izvo zvinopesana zviri mukumufarira kuve muKristu. Zvinogona kunge zvisiri kwenguva refu mafoto etennis nyeredzi achifungisisa mukereke, akapiwa kuti chiitiko ndechimwe chezvinhu zvaari kuita.
Unoziva here kuti yaBianca yakatumidzwa zita rekuti "Vanessa" mushure memutambi uye muimbi Vanessa Williams? Zita rake rekutanga "Bianca" nderekuItaly kwakatangira uye zvinoreva "chena".
Uye zvakare, zita rake remadunhurirwa rekuti "Bibi" rinozivikanwa nevasikana vane "Bianca". Nekudaro, izvo zvinorehwa nesurname yake hazvisati zvichizozivikanwa panguva yekunyora.
Nyeredzi yetennis haina kuputa, kana kupihwa kunwa panguva yekunyora. Anotarisa pakuchengeta hupenyu hune hutano sezvo pfungwa dzake dzinoiswa pakurapa mamwe makuru mazita anonzi slam.
Unyanzvi hwemuviri pamwe ndiyo yekupedzisira runyorwa pane tennis nyeredzi runyorwa rwezvinofarira sekutaridzika kwake kwakanaka uye kukwirira kukuru kwe1.7m kunoita kuti ma tattoos amubate seisina kufanira kukwezva.
Thanks for reading vedu Bianca Andreescu Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!